KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Ebinom ka kyerɛɛ Yeremia sɛ ɔmmɔ mpae nhwehwɛ akwankyerɛ mma wɔn (1-6)
Yehowa ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Munntu mo nan nnsi Egypt” (7-22)
42 Ɛnna asahene no nyinaa ne Karea ba Yohanan+ ne Hosaia ba Yesania* ne nnipa no nyinaa, efi akumaa so kosi ɔkɛse so bae, 2 na wɔka kyerɛɛ odiyifo Yeremia sɛ: “Yɛpa wo kyɛw, tie yɛn adesrɛ yi, na bɔ Yehowa wo Nyankopɔn mpae ma yɛn, yɛn a yɛaka yi nyinaa. Efisɛ nnipa bebree no, kakraa bi na aka,+ sɛnea wuhu yi. 3 Ma Yehowa wo Nyankopɔn nkyerɛ yɛn ɔkwan a yɛmfa so ne nea yɛnyɛ.” 4 Ɛnna odiyifo Yeremia ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mate nea moaka no, na mɛbɔ Yehowa mo Nyankopɔn mpae sɛnea moaka no. Na mmuae biara a Yehowa de bɛma mo no, mɛka akyerɛ mo. Meremfa asɛm baako mpo nsie mo.” 5 Na wɔka kyerɛɛ Yeremia sɛ: “Akwankyerɛ a Yehowa wo Nyankopɔn bɛsoma ama woabɛka akyerɛ yɛn no, sɛ yɛanni so pɛpɛɛpɛ a, Yehowa ne yɛn dansefo nokwafo a onni huammɔ. 6 Papa oo, bɔne oo, yebetie Yehowa yɛn Nyankopɔn a yɛresoma wo ne nkyɛn no, na asi yɛn yiye, efisɛ Yehowa yɛn Nyankopɔn na yetie n’asɛm.” 7 Nnafua du akyi no, Yehowa ne Yeremia kasae. 8 Enti ɔsoma kɔfrɛfrɛɛ Karea ba Yohanan ne asahene a wɔka ne ho nyinaa ne nnipa no nyinaa bae, efi akumaa so kosi ɔkɛse so.+ 9 Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Nea Yehowa, Israel Nyankopɔn a mosomaa me sɛ memfa mo adesrɛ nkɔto n’anim no aka ni: 10 ‘Sɛ mokɔ so tena asaase yi so a, me nso mɛma mo so asi hɔ, na merennwiriw mo ngu; medua mo, na merentu mo ase, efisɛ menu me ho* sɛ mede mmusu aba mo so.+ 11 Munnsuro Babilon hene a ne nti moabɔ hu no.’+ “‘Munnsuro no,’ Yehowa asɛm ni, ‘efisɛ meka mo ho, na megye mo na mayi mo afi ne nsam. 12 Na mehu mo mmɔbɔ,+ na ɔno nso behu mo mmɔbɔ na wasan de mo akɔ mo asaase so. 13 “‘Na sɛ moka sɛ: “Daabi, yɛrentena asaase yi so!” na sɛ moantie Yehowa mo Nyankopɔn asɛm, 14 na moka sɛ: “Daabi, Egypt asaase so na yɛbɛkɔ,+ na ɛhɔ de, yɛrenhu ɔko, yɛrente abɛn nnyigyei, na ɔkɔm renne yɛn; ɛhɔ ara na yɛbɛtena” a, 15 ɛnde muntie Yehowa asɛm, O Yudafo a moaka. Nea asafo Yehowa, Israel Nyankopɔn no aka ni: “Sɛ moasi mo bo sɛ Egypt na mobɛkɔ, na sɛ mokɔ kɔtena hɔ* ampa a, 16 ɛnde sekan a musuro no, ɛbɛtoa mo wɔ Egypt asaase so hɔ, na ɔkɔm a musuro no, ebedi mo akyi akɔ Egypt, na ɛhɔ na mubewuwu.+ 17 Na wɔn a wɔde asi wɔn ani so sɛ wɔbɛkɔ Egypt akɔtena hɔ no nyinaa, sekan ne ɔkɔm ne nsanyare a edi awu* na ebekunkum wɔn. Mmusu a mede reba wɔn so no, obiara remfi mu nka, na obiara rennya ne ti nnidi mu.”’ 18 “Na nea asafo Yehowa, Israel Nyankopɔn no aka ni: ‘Sɛnea mihwiee m’abufuw ne m’abufuhyew guu Yerusalemfo so no,+ saa ara na sɛ mokɔ Egypt a, mehwie m’abufuhyew agu mo so, na mobɛyɛ nnome, na moadan biribi a ɛyɛ hu, ne abusude, na mo anim begu ase,+ na morenhu ɛha yi bio.’ 19 “Yehowa akasa akyerɛ mo, O Yudafo a moaka. Munntu mo nan nnsi Egypt. Munhu paa sɛ mabɔ mo kɔkɔ nnɛ sɛ 20 mo bɔne nti, mode mo nkwa* betwa so. Efisɛ mosomaa me kɔɔ Yehowa mo Nyankopɔn nkyɛn sɛ, ‘Bɔ Yehowa yɛn Nyankopɔn mpae ma yɛn, na asɛm biara a Yehowa yɛn Nyankopɔn bɛka no, ka kyerɛ yɛn, na yɛbɛyɛ.’+ 21 Maka akyerɛ mo nnɛ, nanso morentie Yehowa mo Nyankopɔn asɛm, na nea wasoma ama mabɛka akyerɛ mo nso, morenyɛ mu biara.+ 22 Enti munhu pefee sɛ, sekan ne ɔkɔm ne nsanyare a edi awu na ebekunkum mo wɔ baabi a mopɛ sɛ mokɔ na mokɔtena hɔ no.”+
^ Ɔno ara ne Yaasania wɔ 2Ah 25:23. Ɔno ara nso na wɔfrɛ no Asaria wɔ Yer 43:2 no.
^ Anaa “ɛbɛyɛ me yaw.”
^ Anaa “mokɔ kɔtena hɔ kakra.”